Vaovao - kofehy zaitra tsy fantatrao
Nandritra ny fotoana iray, ny orinasan-damban-trano dia nihaona tamin'ny "varavarana kalitao" isan-karazany rehefa manondrana any Eropa, ary na ny vokatra fitafiana ho an'ny ankizy sasany aza dia nahitana fitakiana be noho ny kofehy fanjairana tsy manara-dalàna. Na dia mitaky ampahany kely amin'ny akanjo aza ny fanjairana, ny kalitaon'ny kofehy manjaitra dia misy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny akanjo, ary ny indostrian'ny akanjo iraisam-pirenena dia mitaky fitakiana avo kokoa amin'ny filanjana fanjairana, saingy mbola betsaka ny orinasa tsy dia be loatra fahatakarana ny sanda azon'ny kofehy manjaitra noforonina. Noho io antony io dia nanadihady an'Andriamatoa Xin Zhenhai, mpitantana jeneralin'ny Vertex Thread Industry ny mpitati-baovao iray avy amin'ny "Clothing Times".
Ny kofehy manjaitra dia kely mahita lehibe
"Nandritra ny fotoana lava be, firenena eoropeanina maro no namepetra fatratra ny kalitaon'ny akanjo aondrana avy any Chine, ary maro ny vokatra entin'ny orinasa an-trano no tafaverina, ka niteraka fatiantoka lehibe teo amin'ny orinasa." Xin Zhenhai dia nilaza hoe: “Ohatra, misy ireo orinasa mpanondrana akanjo any an-toerana naverin'ireo mpividy eropeana noho ny olan'ny kalitaon'ny vokatra. Tsy nisy nieritreritra ny anton'ny fiverenana. Izany fotsiny dia tsy nifanaraka tamin'ny fenitra ireo mari-pamantarana ara-batana sy simika an'ny kofehy fanjairana. Ny kofehy fanjairana volondavenona dia hita fa nisy 69,9 mg / kg 4-aminoazobenzene, bankirompitra ny orinasa noho ny fitakiana be. "
Manontany tena ny olona maro, misy fifandraisana akaiky tokoa ve eo amin'ny fanjairana kofehy sy ny kalitaon'ny akanjo? Nanazava i Ye Guocheng: “Raha ny tena izy, tsy manaraka ny fenitra ireo tondro ara-batana sy simika, io ihany no iray amin'ireo antony. Ohatra iray hafa, amin'ny fizotry ny famokarana fitafiana ho an'ny ankizy Ny kofehy fanjairana izay ampiasaina dia mitaky fepetra henjana kokoa amin'ny resaka fahalalahana an-tserasera. Fantatry ny rehetra fa na ny tsipika famokarana akanjo ho an'ny ankizy na ny tsipika famokarana akanjo ho an'ny olon-dehibe, dia famokarana sy fanodinana mekanika daholo izy rehetra, ary asa famokarana tsipika fivoriambe daholo izy ireo, fa raha eo amin'ny tsipika famokarana Ny kalitaon'ny kofehy fanjairana ampiasaina amin'ny ny salantsalany dia tsy hoe misy fiantraikany amin'ny faharetan'ny fitafiana ihany, fa ny tena zava-dehibe, dia hiteraka fantsom-panjaitra amin'ny milina fanjairana eo amin'ny tsipika famokarana. Ity olana ity dia tsy azon'ny olona maro, na dia amin'ny indostria maro aza. Tsy dia niraharaha an'io olana io ny olona. ”
Raha ny filazan'i Xin Zhenhai, ny kofehy fanjairana avo lenta ampiasaina amin'ny famokarana akanjo dia tsy mila matanjaka sy mateza ihany, fa koa ny ambonin'ilay kofehy fanjairana dia tokony ho malama, tsy misy kilema ary tsy misy tonona. Rehefa ampiasaina amin'ny milina fanjairana indostrialy ny kofehy fanjairana toy izany, dia tsy hanentsina ny fanjaitra amin'ny fanjairana izy io ary hahatonga ny fanjaitra vaky. Mifanohitra amin'izany, ny kofehy fanjairana tsy dia misy kalitao matetika dia misy burrs sy tonon-taolana, ary tapaka ny fanjaitra rehefa tsy fantatra. Raha tsy hita ara-potoana ireo fanjaitra vaky ireo dia mety miraikitra amin'ny akanjo izy ireo. Ho an'ny akanjon'ny ankizy izany. Zavatra mampidi-doza tokoa izany ho an'izay mitafy azy.
"Ohatra, raha mahita fanjaitra feno tsy feno ny mpanara-maso kalitao mandritra ny fizotry ny famokarana dia tsy maintsy mitady ireo fanjaitra vaky hafa izy hanaporofoana fa tsy misy ambiny amin'ireo akanjo, ka ity andiam-pitafiana Offline ity. Raha tsy izany, na dia fanjaitra kely voahidy aza tsy hita na mijanona amin'ny akanjo, dia mety hisy vokany tsy ampoizina. Ny tena matotra kokoa, raha misy toe-javatra mitovy amin'izany hita amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso kalitao ny toerana fanondranana azy, dia ny fodiana entana na sazy sazy amin'ny orinasa dia hiteraka fatiantoka ara-toekarena lehibe ho an'ny orinasa. " Xin Zhenhai dia nilaza hoe: “Kely ny kofehy fanjairana, saingy hetsika lehibe mifandraika amin'ny sombin-damba sy orinasa iray mihitsy aza. Matetika ny Sinoa dia miteny hoe: rava tao amin'ny akanim-borona ny fiakarana ', raha ny marina, izany no fahamarinana. ”
Ny departemanta mifandraika amin'izany koa dia nampahatsiahy ireo orinasam-barotra vahiny sy mpanamboatra akanjo fanondranana fa ho an'ny akanjo aondrana any amin'ny Vondrona eropeana, dia tsy vitan'ny hoe tsy ho afaka amin'ny loko azo voarara sy ireo akora voarara hafa ny lamba, fa hanamafy ny fandrarana ny kofehy fanjairana, kofehy amboradara, kofehy ary kojakoja hafa. Ny fifehezana ny loko azota dia tsy tokony hohadinoina noho ny ampahany kely amin'ny fitaovana fanampiana ampiasaina amin'ny akanjo.
Function sy lamaody miaraka
“Raha ny marina, tsy ny fitafin'ny ankizy ihany, fa ny akanjo maro izao no manana takiana avo kokoa amin'ny fanjairana kofehy, toy ny palitao sy akanjo ankafizin'ny besinimaro.” Xin Zhenhai dia nilaza hoe, "Ho an'ny palitao midina, iray amin'ireo olana ara-teknika lehibe ny fomba Hialana amin'ny" velvet velvet "amin'ny toerana misy ny lavaka. Mba hisorohana an'io olana io dia nampivoatra fanatsarana teknika marobe izahay, toy ny fampiasana dingana manokana amin'ny famokarana kofehy fanjairana, mba hahafahan'ny kofehy fanjairana mahazo ny elastika avo kokoa sy ny fivelarana, ka aorian'ny fanjairana palitao miaraka amin'ity karazana ity manjaitra kofehy, dia afaka milalao vokany mamontsina, izay afaka manakana ny pinholes sy hahatratra ny vokatry ny tsy fandavahana. Ho fanampin'ireny, ny velaran'ny kofehy manjaitra dia ampiana amin'ny famolavolana savoka Craftsmanship, io koa dia afaka misoroka ny fisehoan'ny "velvet mihazakazaka" amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izay, amin'ny fanjairana lamba manokana sasany, toy ny akanjo ivelany, lamba denim, sns, dia asongadino ihany koa ny tanjaky ny kofehy fanjairana. ”
Fantatra fa amin'ny fiakarana an-tendrombohitra na fitafiana mandeha an-tsambo, ny kofehy manjaitra dia tsy maintsy manana fanoherana mitafy avo sy fanoherana ny fahanterana; amin'ny resaka seza fiara, ankoatry ny fiasa fampifandraisana manan-danja dia ilaina ihany koa ny hafanana ambony sy ny fanoherana UV. Amin'ny lamba indostrialy sasany etsy ambony, ny kalitaon'ny kofehy manjaitra dia mifandray mivantana amin'ny fiarovana ny ain'ny mpampiasa aza.
Ho an'ny ankamaroan'ny akanjo tsotra, miaraka amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny lamaody, ny akanjo dia natambatra ny lamaody sy ny asany, ary ny zaitra nozaitra dia nisy heriny lehibe teo amin'izy roa. Taloha, ny kofehy manjaitra ho fitaovana fampifandraisana lamba dia mitana endrika haingon-trano sy mampifandray, fa ankehitriny kosa ny kofehy manjaitra dia manana anjara asa miasa ihany koa. "Ohatra, amin'ny toe-javatra mahazatra, ny kofehy manjaitra dia mila manana fanoherana ny ranomaso, fahamaotinana tsara, fitehirizana ary malefaka. Ho an'ny akanjo miasa manokana dia takiana ihany koa ny tsy ahazoana rano, fireproof, anti-static, anti-ketrona, Anti-antitra ary ireo zavatra hafa takiana amin'ny famitana manokana. " Xin Zhenhai nilaza.
"Ankoatr'ireo fiasa mahazatra ireo, ny kofehy fanjairana dia manana anjara asa fanampiny: ny haingon-trano toy ny fampiasana mivantana amin'ny lamba fanaka, na mivantana amin'ny fizotry ny famokarana lamba, dia lasa ampahany lehibe amin'ny lamba mampiavaka azy." Xin Zhenhai nilaza fa, «nanomboka. Ny sasany amin'ireo mpamorona lamba avant-garde sy marika vita amin'ny lamba dia nanomboka nanamboatra kofehy fanjairana miloko mivantana amin'ny volon'izy ireo manokana ho an'ny famolavolana sy famokarana. Ity haitao fanodinana ity dia ampiasaina amin'ny vokatra lamba somary avo lenta ihany. "
Izy io dia noho ny tombony azo avy amin'ny Indostria Veilline amin'ny lafiny maro izay orinasa sy marika maro kokoa no nisafidy ny hitazona ny fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'i Huamei (marika amam-panao amin'ny raharaham-barotra Youngor, Smith Barney, Yaya, sns.). Ireo marika ireo, tsy vitan'ny hoe manana fepetra avo lenta amin'ny kalitaon'ny vokatra, fa mitaky fandrindrana avo lenta eo amin'ny kofehy fanjairana sy ny fironana lamaody amin'ny akanjo ihany. Amin'io lafiny io, ny kofehy manjaitra dia tsy mahery fo aorinan'ny sehatra intsony, fa tokony ho mpanazatra lamaody sy mpanentana koa.